မကွေးတက္ကသိုလ်၌ ပညာသင်ကြားနေကြသော အရှိုချင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများတွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပ - Yangon Media Group
မကွေးတက္ကသိုလ်၌ ပညာသင်ကြားနေကြသော အရှိုချင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများတွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပ
မကွေး၊ အောက်တိုဘာ ၂၃
ပဉ္စမ အကြိမ်မြောက် မကွေးတက္ကသိုလ် မှ အရှိုချင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူများတွေ့ဆုံပွဲကို အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နံနက်က မကွေးတိုင်းဒေသ ကြီး မကွေးမြို့ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ မကွေးတက္ကသိုလ်၌ ပညာသင်ကြားနေသော အရှိုချင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၂ဝဝ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
”အရှိုချင်းတိုင်းရင်းသား ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေတွေ့ ဆုံပွဲလုပ်တာ ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ် ချက်ပါ။ အရှိုချင်းတိုင်းရင်းသားတွေ ရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေမပျောက် ပျက်အောင် ဒီထက်မကစည်းလုံး ညီညွတ်စွာနဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားရမှာပါ”ဟု မကွေးတိုင်းဒေသ ကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီးဆလိုင်းလှထွန်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ချင်းတိုင်း ရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဆလိုင်းလှ ထွန်းက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား ပြီး တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဒု တိယဥက္ကဋ္ဌ ဆလိုင်းဝင်းမှူးကတွေ့ ဆုံပွဲကျင်းပရခြင်း ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် တာဝန်ယူ ခဲ့သည့် ဦးဆောင်ကော်မတီနှင့်မိတ် ဆက်ပေးကာ တိုင်းဒေသကြီးတိုင်း ရင်းသားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဦးစီးဌာနမှ ဆလိုင်းအောင်ဝင်းက အားပေးစကားပြောကြားသည်။
”တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ရတဲ့ ရည် ရွယ်ချက်က ကျောင်းတက်နေစဉ် ကာလအတောအတွင်းမှာ အရှို ချင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပိုမို ရှင်းနှီးအောင်လုပ်တဲ့သဘောပါ။ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေကနေရာ ဒေသပျံ့နှံ့နေကြတဲ့အတွက် တွေ့ ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကူညီရိုင်းပင်းရအောင် တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်တာပါ”ဟု တွေ့ဆုံ ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဆလိုင်းဝင်းမှူးက ပြောသည်။
အခမ်းအနားတွင် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အတွက် ဦးဆောင်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များအားရွေးချယ်ခြင်း၊ အရှိုချင်းတိုင်းရင်းသားကျောင်းသား နှင့် ကျောင်းသူများအနက်မှ King နှင့် Queen ရွေးချယ်ခြင်း၊ သီဆို ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့် ရင်ဖွင့်စကားပြော ကြားခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ ကြောင်း သိရသည်။
နယ်သာလန်-မြန်မာ သံတမန်ဆက်ဆံရေး နှစ်(၇ဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် 'ပန်းသဘင်ပွဲတော်' သုံးရက်တိုင်တိုင??
ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တက် မော်တော်ယာဉ်လိုင်းတွင် မော်တော်ယာဉ်ပြေးဆွဲခွင့် ရရှိရေး မွန်ဝန်ကြ??
အရေးပေါ် နှလုံးသွေးကြောချဲ့ ကုသမှု ခြောက်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားနှင့် နှလုံးသွေးကြေ
အသိမ်းဆည်းခံမြေများ ပြန်လည် စွန့်လွှတ်ရန်ကိစ္စ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြထားသော်လည်း
နမ္မတူမြို့နယ်ဘက်မှ စစ်ဘေးရှောင် ၃၆ဝ ကျော် သီပေါမြို့နယ်သို့ ရောက်ရှိ
ခြေထောက် ကျိုးသွားသော်လည်း ရုပ်ရှင် ဆက်ရိုက်နေသည့် တွမ်ခရုဇ်
အမေရိကန်၏ ဒုံးပျံသတိပေး ဂြိုဟ်တုများ တည်ဆောက်ရန် လော့ခ်ဟိဒ်က ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၉ ဘီလီယံဖိုး ကန်ထရ??